Global Voices teny Malagasy » Sarin’ny Tafika Japoney Tanatin’ireo Hady Fiafenana Nandritra ny Ady Rosiana-Japoney tamin’ny 1904-1905 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2018 16:20 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Shina, Mediam-bahoaka, Saripika, Tantara
“Japoney Mpiambin-drano miaro ny famatsian-dranon'ny toby amin'ny loto.” (loharano )
Vao haingana izay, nizara andianà sary miloko vitsivitsy mampiseho ireo miaramila Japoney sy ny fiainana tany amin’ny toby nandritra ny ady Rosiana-Japoney tamin'ny taona 1904-1905  ny Public Domain Review , bilaogy iray tena tsara. Manome topimaso mahavariana ny ady ireo stereôgrama miloko, ady izay niteraka ireo hetsika  tamin'ny taonjato faha-20 tamin'ny fomba maro, isan'izany ny hady fiafenana izay niafara tamin'ny fahasimbana marobe noho ny fampidirana ireo teknolojia avo lenta teny amin'ny toeram-piadiana.
Ilay Amerikana mpakasary T.W. Ingersoll  no naka ireo stereôgrama ireo, izay tamin'ny 1904 dia nandeha tany Port Arthur (Lyusunkou  ankehitriny, distrikan'i Dalian  any avaratra atsinanan'i Shina), sehatry ny ady lava sy nahatsiravina nandritra ny ady Rosiana-Japoney . Nahavita nirakitra ny fiainana andavanandron'ny tafika Japoney tanatinà andian-tsary an-jatony teo  i Ingersoll, izay tsaroan'ny  ankamaroan'ny olona ankehitriny amin’ny sary stereôgrafikan'i Etazonia  nalainy tamin'ny faraparan'ny taonjato farany teo.
Niditra ao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ny sarin'i Ingersoll ankehitriny, tsy misy fizakàmanana fantatra mihatra aminy, ary mipetraka an-tserasera amin'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny Tranombokim-panjakan'i Boston , ny Anjerimanontolo Monash  ary ny Tranomboky Skillman ao amin’ny Anjerimanontolo Lafayette . Mahaliana manokana ny rakitry ny Lafayette satria arahinà teny fanazavana izay toa nosoratan'i Ingersoll tenany mihitsy ireo sary.
“Ireo Miaramila Japoney Vaovao Vao Midina ny Fitaterana.” (loharano )
[…] Nila vatan-dehilahy 25.000 ny fanafihana tsy misy dikany ny lapa natao ny 9 Aogositra ka hatramin'ny 26 Aogositra. Niasa mafy ireo fitaterana nitondra miaramila vaovao nankany Dalny. (loharano )
“Japoney mpiambina ny hady fiafenana anaty korontana”. (loharano )
[…] Tsy navela niala ny hady ireo lehilahy na inona na inona antony. Tsy maintsy nijery sy niandry, nisakafo, nisotro ary natory izy ireo teto. Nankarary ny loto, ny hatsiaka nivaivay, ary ny fipoahan’ny baomba Rosiana mety handratra na hamono azy ireo amin’ny fotoana rehetra, raha toa ka fahafatesana kosa no niandry ireo izay nampiseho ny lohany mihoatra ilay rindrina miaro an'ilay hady, tokony teo amin’ny dimy amby efapolo na sivifolo metatra miala ny basin'ny mpitily kinga Rosiana. (loharano )
“Miaramila Japoney manasa ny lovian’ny tobiny.” (loharano )
[…] Samy nitondra ny antsoiny hoe “panican”-ny daholo ny miaramila Japoney rehetra, izay toa nitovy tamin'ny gamela fitondran’ny mpiasa Amerikana sakafo. Nisy efitra maromaro izy io, ary tanatin'io no nitondran’ny miaramila ny anjara vary an'adiny, ny trondro maina, ny tavin-kena maina, ny sira, ary indraindray kitsaotsao (concombre) notehirizina tamin’ny ranon-tsira sy vinaingitra, na koa vatomamy. Finoan’ireo dokotera Eoropeana sy Amerikana ny hoe ny sakafo tsotra nohaniny no nahatonga ny hery mahagagan'ny fanasitranana nasehon'ireo miaramila Japoney naratra. (loharano )
“Sary tao amin'ny hady fiafenan'ny Japoney.” (loharano )
[…] Nandavaka [hady fiafenana] mirefy sivy amby roapolo kilaometatra ny Japoney nandritra ny fahirano, tsy isaina anatin'izany ireo miolakolaka avy amin'ny iray mifanila amin’ny iray hafa manaraka azy. Io hady aseho eo amin'ny sary io dia hady iray teo alohan'ny manda “P” izay nalain'ireo Japoney nandritra ny antsoina hoe fanafihana lehibe fahatelo tamin'ny 29 Oktobra hatramin'ny 01 Novambra, naverin'ny Rosiana nalaina ny alin'io ary azon'ny Japoney indray avy eo. Teo ilay rezimanta iray nodidiana hamotika ny manda no tsy nety nanaraka ny baiko, ary nalefa haingana tao ambadiky ny toerana fitifirana, raha notarihina ho any aloha kosa ny rezimanta fahasivy izay nitafy ny voninahitra tsy mety maty azony tamin'ny fakàna ilay manda […] (loharano )
“Japoney Maratra Ampidirina ao amin'ny Hôpitalin'i Dalny.”(loharano )
Famohàna ny Kiolasinà “Osaka Baby” (anarana nomena ireto tafondro Japoney ireto).” (loharano )
Nomen'ireo mpifandray an'ady ny anarana hoe “Osaka Babies” ireo tafondro mahery vaika fiarovana ny morontsiraka nentin’ireo Japoney avy any Japana hiadivana an'i Port Arthur. Natao hiarovana ny morontsirak'i Japana amin'ny fanafihana an-dranomasina ireo tafondro ireo, ary tsy nokasaina hiala amin'ny fototra niorenany. Saingy lasa voatery nampiasa fitaovampiadiana mitovy tanjaka amin’ny an’ny Rosiana izy ireo hiatrehana ny ady rehefa hita fa naka ny tafondro ngeza indrindra avy amin'ireo sambo mpiady tsy niasa tany Port Arthur sy nametraka izany teo amin'ny toerany ny Rosiana. (loharano )
Fakana aina anatinà tobin-tafika Japoney. Fahazoandàlana CC BY 2.0. (loharano )
Mahatalanjona ny fomba fakan’ny Japoney ny fomba Tandrefana ho azy. Manadihady ny zava-drehetra izy ireo, ary raisiny am-pahavononana avokoa izay rehetra eritreretiny fa hanatsara ny fomba fiainany na hanamora ny fomba fiasany. Naka vaomiera mihitsy aza izy ireo hanadihady ny tombontsoa azo avy amin'ny Kristianisma raha oharina amin’ny finoany, saingy nilaza ilay vaomiera fa malefaka sy tso-po kokoa ary manana fitondrantena mendrika kokoa nòho ny firenena Kristiana rehetra ny Japoney, ary tsy ahitàna ireny Kristiana iringiriny sy mpihatsaravelatsihy ireny ao Japana. Mampiseho ireo miaramila tsy miankina Japoney mandihy “quadrille” eo ambanin'ny fitarihanà Amerikana mpifandray an'ady iray ity sarintsika ity. Milalao ny tarika avy ao Osaka ary manao fanazarantena am-pahamatorana tokoa ireo miaramila ireo, toy ny hoe i Japana iray manontolo no mijery azy. Fanatanjahantena feno fahendrena avokoa no fialambolin-dry zareo ary tsy nisy herisetra izany, lalao tahaka ny amboahaolo sy gisa, ary indraindray fihiràna amin'ny feo ambany ny hiran’ny fandresena tsy misy farany noforonin’ny Jeneraly Fukishima, izay niady teo ambanin'ny Maresaly Oyama. (loharano )
Mbola maro ireo sary azo jerena ao amin'ny tahirin’ny Tranombokim-panjakana ao Boston  ao amin'ny Flickr, sy ao amin'ny tahirin’ny Anjerimanontolo Monash  ary ao amin'ny tahirin’ny Tranomboky Skillman ao amin'ny Anjerimanontolo Lafayette .
Miaraka amin'ny fahazoandàlana CC BY 2.0 ny sary rehetra avy amin'ny kaonty Flickr ofisialin'ny Tranombokim-panjakana ao Boston . Ireo fanazavàna ny sary rehetra kosa avy amin'i T.W. Ingersoll, hita tao amin'ireo Tranombokin'ny Anjerimanontolo Lafayette  sy avy aminà loharano hafa, sehatra ho an'ny daholobe (tsy misy fizakàmanana voafaritra ).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/15/116836/
 Rosiana-Japoney tamin'ny taona 1904-1905: https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Japanese_War
 niteraka ireo hetsika: https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Japanese_War#cite_note-FOOTNOTESteinberg20086-84
 ady Rosiana-Japoney: https://www.historyextra.com/period/your-60-second-guide-to-the-russo-japanese-war/
 andian-tsary an-jatony teo: http://digital.lafayette.edu/islandora/search/*:*?f%5B0%5D=cdm.Relation.IsPartOf%3A%22East+Asia+Image+Collection%22&f%5B1%5D=cdm.Relation.IsPartOf%3A%22T.W.+Ingersoll+Co.+Stereoviews+of+the+Siege+of+Port+Arthur%22&f%5B2%5D=eastasia.Creator.Company%3A%22T.W.+Ingersoll%22
 amin’ny sary stereôgrafikan'i Etazonia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stereo_cards_by_T.W._Ingersoll
 Tranombokim-panjakan'i Boston: https://www.flickr.com/search/?text=%22Japanese-Russian%20War%201905%22&view_all=1
 Anjerimanontolo Monash: https://repository.erc.monash.edu/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=49&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=Russo-Japanese+War%2C+1904-1905
 Tranombokin'ny Anjerimanontolo Lafayette: http://digital.lafayette.edu/islandora/object/eastAsia:rjwStereo
 tsy misy fizakàmanana voafaritra: https://repository.erc.monash.edu/items/browse?collection=32